Riek Machar Oo Khamiista Saxiixaya Heshiiska Kama Dambeysta Ah – Goobjoog News
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan ayaa sheegtay in uu aqbalay hoggaamiyaha Mucaaradka hubeysan ee koofurta Suudaan Riek Machar in uu saxiixo Maalinta Khamiista qeybta koobaad ee heshiiska kama dambeysta nabadda ee K/suudan.
Hadalkan ayaa yimid kadib war-saxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan.
War-saxaafadeedka oo ku saxiixnaa wasiirka arrimaha dibadda Suudaan Maxamed Axmed ayaa lagu yiri “Dhexdhexaadinta Suudaan shalay waxaa ay qaaday wadahadallo ballaaran oo lalayeeshay hoggaamiyayaasha Mucaaradka ee Riek Machar waxaa ayna ku dhamaatay in uu saxiixo Machar heshiiska nabadgelyada ee kama dambeysta ah qeybtiisa koobaad”.
War-saxaafadeedka wasaaradda ka soo baxay waxaa lagu caddeeyay sidoo kale in dhexdhexaadinta Suudaan ay joogteyneyso in ay fiiro gaar ah u yeelaneyso codsiyada iyo tabashada uu qabo Machar loogana doodi doono shir madaxeedka urur goboleedka IGAD kaasi oo dhici doona bisha October ee soo socota.
Heshiiska shalay ka dhacay caasimadda Khartuum waxaa u saxiixay dowladda K/Suudaan wafdi uu hoggaaminayay madaxweyne Salva Kiir halka Mucaaradka ay u saxiixeen kooxo kale sida uu sheegay Wasiirka arrimaha dibadda ee Suudaan Maxamed.
Heshiiskan ayaa yimid kadib wadahadallo ay dhexdhexaadin ka aheyd IGAD ayna Goob joog ka ahaayeen Madaxweynayaasha Suudaan iyo Ugandha waxaa uuna dhacay 27 June iyada oo lagu heshiiyay xabad joojin joogta ah.
Waxaa xigay arrinkaasi heshiiskii kooxaha K/Suudaan kaasi oo dhacay 7 July laguna heshiiyay jadwaleynta amniga sidoo kale 5 Ogoosto waxaa dhacay Saxiixa heshiis ku saabsanaa sida loo qeybsanayo awoodaha dowladda iyo kheyraadka.
K/suudaan ayaa ka go’aday Suudaanta kale kadib afti dadweyne oo laqaaday sanadkii 2011, waxaana ka dhacay dagaal sokeeye sanadkii 2013, kaasi oo ay ku dhinteen tobanaan kun oo qofka, halka boqalaal kalena ay ku barakaceen.